अभिनेता राजवल्लभलाई मध्यरातमा कसले इग्नोर गर्यो ?
काठमाडौं, मंसिर १८ । अभिनेता राजबल्लभ कोइराला केही वर्षयता अमेरिकामा रहँदैआएका छन् । अध्ययनको शिलशिलामा अमेरिका पुगेका कोइराला श्रम गर्दै उतै ब्यस्त हुन थालेका हुन् ।
सामाजिक संजालमा सक्रिय रहने कोइरालाका पछिल्ला अभिव्यक्तिले उनको निराशा वा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । हालै मात्र कोइरालाले आफ्नो भेरिफाइड ट्वीटरमा एक अभिव्यक्ति दिए ।
उनले त्यहाँ ‘पंखेटा भएर पनि नउड्ने चरा र अनलाईन भएर पनि नबोल्ने मान्छे उस्तै हुन् ।’ भनी लेखेका थिए । दुई दिनअघि अर्थात् डिसेम्वर १ को दिन रातको ११ बजेर २० मिनेट जाँदा उनले यस्तो ट्वीट गरेका थिए ।
राजबल्लभले ट्वीट गरेलगत्तै उनका साथी तथा सुभचिन्तकले रिट्विटी गर्दै ‘को साथी बोलेन ?’ भनी सोधे । जवाफमा उनले केही पनि लेखेका छैनन् । उनका सुभेच्छुकले त यसबारे आशंका गर्नुका साथै चिन्ता पनि प्रकट गरे ।
राजवल्लभको ट्वटीबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, ‘रातको समयमा राजवल्लभ कोही साथीसँग कुरा गर्न चाहन्थे । तर साथीले उनलाई अस्विकार गरे ।’ ट्वीटरमा जिज्ञाशा यस्तो पनि छ कि, रातको १२ बज्नै लाग्दा राजवल्लभ कोसँग बोल्न चाहेका थिए ?
सम्बन्धमा रहेका राजवल्लभको को साथी हो त्यो, जसले उनलाई रातको बेला इग्नोर गर्यो ? यस्ता थुप्रै जिज्ञाशा र चासोले सामाजिक संजाल भरिएको छ । रोजवल्लभ भने यस विषयमा मौन छन् । केही महिनाअघि मात्रै इंगेजमेन्ट गरेका राजवल्लभ विवाह गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।